Tag: Garoowe | Sagal Radio Services
War murtiyeed laga soo saaray shirka Madasha Wasaaradaha Arrimaha Dastuurka
Sagal Radio Services • News Report • December 24, 2017
Shirka Madasha Wasaaradaha Arrimaha Dastuurka kulankiisii sedexaad ayaa ku soo gebagaboobay magaalada Garoowe, waxaana laga soo saaray War-murtiyeed ka koobnaa 12 qodob.
Xildhibaanada Barlamaanka Puntland oo kalsoonida kala laabtay xukuumadda Madaxweyne Gaas
Sagal Radio Services • News Report • July 18, 2017
Balamaanka Puntland oo maanta kalfadhi loo dhan-yahay ku yeeshay magaalada Garowe ayaa kalsoonidii kala laabtay xukuumad-da uu hogaamiyo madaxweyne Cabdiwali Maxamed Cali Gaas ,taasi oo shaqaynaysay dhowrkii sano ee la soo dhaafay.
Caruur iyo Dad Da’ ah Oo Shuban Biyood Ugu Geeriyooday Magaalada Garoowe
Sagal Radio Services • News Report • February 18, 2017
Wararka Aynu ka Heleyno Kaam Shabeele oo Kamid ah Kaamamka Kuyaala Magaalada Garoowe ayaa Sheegay in Halkaasi Uu Kadilaacay Cudurka Shuban Biyoodka oo Maalmahaan Fara Ba’an Kahaaya Dadka Barakacayaasha ah Ee Kudhaqan Magaaladaasi Garoowe.
Ra’iisul wasaaraha Soomaaliya iyo madaxweynaha Puntland oo kulan gaar ah ku yeeshay Garowe
Sagal Radio Services • News Report • December 11, 2016
Ra’iisul wasaaraha Soomaaliya Cumar C/rashiid Cali oo shalay tagay magaalada Garowe ayaa kulan gaar ah la qaatay madaxweynaha maamulka Puntland C.Welli Maxamed Cali Gaas.
Xildhibaan ka tirsanaa Baarlamanka Soomaaliya oo Garoowe ku geeriyooday
Sagal Radio Services • News Report • November 21, 2016
Allaha u naxariistee waxaa Xalay xilli danbe Magaalada Garoowe ee Caasimada Dowlad Goboleedka Puntland ku geeriyooday Xildhibaan Daahir Xaaji Geelle Faarax oo kamid ahaa Baarlamaanka Soomaaliya ee cusub, isagoo horeyna u soo ahaan jiray Xildhibaan iyo xubin ka mid ah Guddiga Baarlamanka Soomaaliya u qaabbilsan Jaamacadda Carabta.
Kooxo hubeysan oo xalay weeraray Ergooyinka ku sugan Garowe
Sagal Radio Services • News Report • November 5, 2016
Kooxo Hubeysan ayaa xalay weeraray hotelada ay degan yihiin Ergooyinka ku sugan magaalada Garowe, kuwaasoo dooranaya Xildhibaanada Aqalka Hoose.
Doorashada Aqalka Hoose oo ka socoto Garowe iyo Xildhibaankii ugu horeeyay oo la doortay (Sawirro)
Wararka naga soo gaaraya magaalada Garowe ayaa sheegaya in halkaasi ay ka bilaabatay doorashada xubnaha aqalka hoose ee baarlamaanka, kuwaasi oo ka imaanaya deegaanada Puntland.
Wasiirkii Warfaafinta Puntland oo is casilay
Sagal Radio Services • News Report • September 26, 2016
Wasiirkii Warfaafinta Maamulka Puntland Maxamuud Xasan Soo-Cadde ayaa goor dhow ku dhawaaqay inuu iska casilay xilkiisa, iyadoo warar kala duwan ka soo baxayaan is casilaadiisa.
Maxkamada ciidamada Puntland oo xukun dil ah ku fulisay sarkaal ka tirsanaa ciidamada daraawiishta
Sagal Radio Services • News Report • August 15, 2016
Maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Puntland Soomaaliya ayaa xakun dil toogasho maanta ku fulisay magaalada Garowe sarkaal ka tirsanaa ciidamada ammaanka.
Puntland oo bilowday maxkamadeynta Maxaabiistii Al-Shabaab ee lagu qabtay dagaaladii bishii Maarso
Sagal Radio Services • News Report/Opinion • June 16, 2016
Maamulka Puntland ayaa bilowday maxkamadeynta maxaabiistii Al-Shabaab ee lagu qabtay dagaaladii bishii Maarso ka dhacay deegaano ka tirsan Nugaal iyo Mudug, halkaasoo ay doonyo ku gaareen.
Rag looga shakisan yahay Al-Shabaab oo laga soo qabtay guri ku yaal Garowe
Sagal Radio Services • News Report • April 12, 2016
Ciidamada ammaanka Gobolka Nugaal ayaa howl gallo ay ka sameeyeen xaafado ka tirsan magaalada Garowe ku qabtay illaa 15 ruux oo looga shakisan yahay inay ka tirsan yihiin Al-Shabaab, kuwaasoo loogu galay guri ay degenaayeen.
Akhriso Heshiiska dowladda Federaalka iyo Puntland oo dhameystiran
Sagal Radio Services • News Report • April 4, 2016
Waxaa goor dhow magaalada Garowe lagu saxiixay qaabka doorasho ee Soomaaliya ka dhacaya sanadkan 2016, kadib wada hadalo labo todobaad u socday dowladda Federaalka iyo Puntland.
Wasiirka A. Dibadda Itoobiya, Axmed Madoobe iyo Ergeyga QM oo ku wajahan Garowe
Sagal Radio Services • News Report • April 3, 2016
Wararka ka imaanaya magaalada Garowe ee xarunta Gobolka Nugaal ayaa sheegaya in maanta lagu wado inay gaaraan wafuud heer sare ah oo ka socda Beesha caalamka, si ay goob joog uga noqdaan heshiis la sheegay in laga gaaray hanaanka doorashada u dhaceyso sanadkan.
Wararkii ugu dambeeyay kulamada Garowe oo wali wax natiijo ah ka soo bixi la’yihiin
Sagal Radio Services • News Report • April 2, 2016
Wararka ka imaanaya magaalada Garowe ayaa sheegaya in aan wali wax is afgarad laga gaarin kulamo u socda dowladda Federaalka iyo Maamulka Puntland, kaasoo looga hadlayay hanaanka doorasho ee sanadkan 2016 ka dhacaya Soomaaliya.
R.W Cumar “Waan la xanuunsaneynaa walaalaheena Turkiga ee la dhibaateeyay iyaga oo shacabkeena gargaaraya”
Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka ah ee Soomaaliya Mudane Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke, ayaa si kulul u cambaareeyey weerarkii waxashnimada ahaa ee lagu laayey dhaqaatiir isugu jirtay Soomaali iyo Turki xili ay gar-gaar u fidinayeen dadkeena Soomaaliyeed, kuwaas oo ka howl gali jiray xarun caafimaad oo ku taal magaalada Muqdisho.
Danjiraha Turkiga u qaabilsan Soomaaliya oo gaaray Garowe
Sagal Radio Services • News Report • March 30, 2016
Safiirka Turkiga u qaabilsan Soomaaliya Amb. Olgen Baker ayaa gaaray magaalada Garowe ee Xarunta Puntland, iyadoo lagu wado in Danjiruhu ku biiro wada hadalada u socda dowladda Federaalka iyo Maamulka Puntland.
Xubno ka socda Beesha Caalamka oo maanta ku wajahan Garowe
Sagal Radio Services • News Report • March 27, 2016
Xubno ka tirsan Beesha Caalamka ayaa maanta oo Axad ah lagu wadaa in magaalada Garowe u tagaan, sidii ay uga qeyb qaadan lahaayeen wada hadalo u dhaxeeya Ra’iisul Wasaare Cumar Cabdirashiid iyo Madaxweynaha Puntland C/wali Gaas, kaasoo looga hadlayo arrimaha hanaanka doorashooyinka Soomaaliya.
Ra’iisul Wasaaraha iyo C/wali Gaas oo maanta ka hadlaya hanaank doorashooyinka
Sagal Radio Services • News Report • March 26, 2016
Shir wada tashi oo looga hadlayo hanaanka doorashooyinka Soomaaliya ayaa maanta lagu wadaa inuu ka dhaco magaalada Garowe, kadib markii shalay uu gaaray Wafdi uu hogaaminayo Ra’iisul Wasaare Cumar Cabdirashiid Cali Sharma’arke.
Ciidamada Ammaanka Puntland oo howl gallo baaritaano ka wada Garowe
Sagal Radio Services • News Report • September 27, 2015
Ciidamada Ammaanka Puntland ayaa howl gallo baaritaano lagu xaqiijinayo ammaanka ka wada magaalada Garowe, iyadoo howl galadan lagu qab qabtay dhalinyaro iyo dad kala duwan oo lagu eedeeyay falal amni daro.
Ciidamada Daraawiishta Puntland oo gadood sameeyay iyagoo ka cabanaya mushaar la’aan
Sagal Radio Services • News Report • September 14, 2015
Wararka ka imanaya magaalada Garowe ee maamulka Puntland ayaa sheegaya in ciidamo aan tiradooda la shaacin oo ka mid ah daraawiishta Puntland ay gadood ka sameeyeen maanta xero ay ku jireen oo ku taal duleedka magaalada Garowe.
Shirkii Garowe ee Puntland, Juballand iyo Federaalka oo uu weli is afgaran-waa ka taagan yahay!
Sagal Radio Services • News Report • July 15, 2015
Kulankii Salaasadii shalay magaalada Garowe ee xarunta Puntland uga furmay Madaxda Puntland & Jubaland iyo Raysalwasaaraha Federaalka Soomaaliya ayaa xalay dhamaaday iyadoo aan wax is afgarad ah laga gaarin qodobadii laga wada dooday.
Ra’iisul Wasaaraha, Hogaamiyeyaasha Puntland iyo Jubbaland oo kulan saddex geesood uga socda Garowe
Sagal Radio Services • News Report • July 14, 2015
Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya, Madaxda Maamulada Puntland iyo Jubbaland ayaa xilligan shir albaabada u xiran ku leh xarunta Madaxtooyada Garowe, iyadoo kulankan oo ah mid saddex geesood ah looga hadlayo arrinta federaalka.
Xiisad ka taagan deegaano ka tirsan Gobolka Nugaal oo ka dhashay Ciidamo ka gadooday Puntland
Ciidamo ka tirsan Maamulka Puntland ayaa maalmo ka hor ka gadooday, iyadoo ciidamadaas u baxsaday deegaanka Eyl oo ka tirsan Gobolka Nugaal, waxaana la soo sheegayaa in ciidamada gadooday iyo ciidamo kale ay isku hor-fadhiyaan deegaankaas.
Puntland oo sharci darro ku tilmaamtay mooshinka ka dhanka ah dhismaha Baarlamaanka Jubba
Sagal Radio Services • News Report • May 23, 2015
Maamulka Puntland ayaa war saxaafadeed ka soo saaray mooshinka ka dhanka ah dhismaha Baarlamaanka Jubba oo cabasho badan iyo dhaliilo xoogan loo jeediyay qaabkii loo soo xulay, waxaana mooshinkaas uu marayaa marxaladii u dambeysay ee codka loogu qaadayo.
Madaxweynaha Soomaaliya oo maanta ka furay Garowe shirka wada tashiga (Sawirro)
Sagal Radio Services • News Report • April 30, 2015
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta si rasmi ah magaalada Garowe ee xarunta Puntland uga furay shirkii labaad ee Madasha Wadatashiga Dowladda Federaalka Soomaaliya iyo Maamul goboleedyada kala ah Puntland, Jubba iyo Koonfuur Galbeed Soomaaliya.
Shir ku saabsan Hiigsiga sanadka 2016 oo maanta ka furmaya magaalada Garowe
Sagal Radio Services • News Report/Opinion • April 29, 2015
Shirka looga hadlayo Hiigsiga sanadka 2016 ayaa maanta waxaa uu magaalada Garowe ee Caasimada Puntland ugaga furmayaa Madaxweynaha dowladda Federaalka Soomaaliya iyo Madaxda dowlad goboleedyada, iyadoo shirkan uu daba socdo shirkii bishii Febraayo ka dhacay Muqdisho.
Shir looga hadlayo Hiigsiga cusub ee sanadka 2016 oo maanta ka furmaya Garowe
Wararka ka imaanaya magaalada Garowe ee xarunta Puntland ayaa sheegaya in shir looga hadlayo Hiigsiga cusub (New Deal) ee sanadka 2016 uu maanta ka furmi doono,iyadoo qaban qaabada shirkan labadii maalmood ee la soo dhaafay ka socotay magaalada.
Heshiiskii Sharci jabinta iyo Cadaalad darada ee Ra'iul Wasaaraha Soomaaliya & Puntland kala saxiixdeen!
Sagal Radio Services • News Report • October 16, 2014
Raisul Wasaare Abdiweli oo hogaaminaya wafti ay kamid yihiin Wasiirada Qorsheynta iyo Tacliinta sare Saciid iyo Ducaale iyo Gudoomiye ku xigeenka Baarlamaanka Somalia Mahad Cawad ayaa la soo saxiixday maamulka Puntland heshiis ku salaysan cadaalad daro iyo jabin dastuurka dalka, Federaalka Somalia oo aan ku dhisneyn qabiil basle dastuurku qorayo in Labo gobol iyo wixii ka badan noqon karaan maamul goboleedyada soomaaliya laga hergelinayo ayaa masuuliyiinta uu hogaaminayo RW Abdiweli si sharci daro ah usoo saxiixeen oo Puntland ka ogolaadeen in Gobolka Mudug loo qeybiyo labo qeybood oo ah qaab qabiil, sidoo kalana ay soo saxiixeen in Maamulka Gobalada dhexe ee Soomaaliya uu noqdo Hal gobol iyo Bar, taas oo ah mid dastuurka Dalka Somalia aan ku qorneyn.
Deg Deg:-Dowladda FD iyo Maamulka Puntland oo Heshiis kala Saxiixday iyo kay oo soo dhaweeyay
Sagal Radio Services • News Report • October 14, 2014
Wada xaajoodii u socday Puntland iyo Dowladda Federaalka ayaa lagu soo waramayaa inuu guul ku dhamaaday ka dib marii ay goor dhow wada saxiixeen 12-qodob Ra’iisul Wasaare Cabdiwali iyo Madaxwayne Cabdiwali Gaas.
GAROOWE: Madaxweyne Gaas oo kulan deg deg ah la leh golihiisa wasiirada
Sagal Radio Services • News Report • September 26, 2014
Madaxweynaha Puntland Cabdiweli Gaas, golihiisa wasiirada iyo saraakiisha ammaanka ayaa kulan deg deg ah kuleh madaxtooyada Garoowe.
Waxaa hada soo idlaaday Khubadihii ay jeedinayeen musharaxiinta xilka madaxtinimada maamulka Puntland waxaana sidoo kale bilowday tii kuxegeenada.
Sagal Radio Services • News Report • January 7, 2014
Waxaa Haatan Xarunta Baarlamaanka kadib Salaadii Duhur kadib si rasmi ah u Furmay Khudbadaha ay Jeedinayaan Musharaxiinta u taagan Xilka Madaxwayne xigeenka Dawlada Puntland.
Qabashada Araajida Musharaxiinta U Taagan Madaxtinimada Puntland Oo Ka Socota Garowe
Qabashada araajida musharixiinta u taagan xilka madaxtinimad maamulka Puntland oo si habsami leh uga socota magaalada Garowe ee xarunta gobolkaa Nugaal.
Deg Deg:- Musharaxiinta & Madaxwaynaha Puntland oo kulankoodii kusoo dhamaaday Natiijo la'aa
Waxaa natiijo la'aan kusoo dhamaaday Kulankii ay Maanta ay Magaalada Garoowe ee Caasimada dawlada Puntland kuwada qaateen Musharaxiinta Xilka Madaxwaynaha Puntland & Madaxwayne Cabdiraxmaan faroole.
Wafdi ka socda maamulka Gaarisa oo Garoowe booqanaya
Sagal Radio Services • News Report • January 22, 2013
Wafdi ka socda maamulka degmada Gaarisa ee xarrunta gobolka waqooyi bari ee Kenya, ayaa maanta gaaray magaalada Garoowe ee caasimadda maamul goboleedka Puntland.
Diblumaasiyiin reer Galbeed ah oo Puntland kala hadlay Dimuqraaddiyadda iyo xaquuqda aadanaha
Sagal Radio Services • News Report • December 5, 2012
Xubno ka socda dalalka reer Galbeedka, ayaa shalay magaalada Garoowe kulan kula qaatay madax ka tirsan maamulka Puntland kuwas oo ka arrinsaday arrimaha xaquuqul insaanka iyo dumuqraaddiyadda.